Maitiro Ekugadzira Graphics ine DhizainiCap iyo Inogona Nyore Kushandiswa paSocial Media kana Webhusaiti muakasiyana Masayizi
Muvhuro, Ndira 13, 2020 Muvhuro, Ndira 13, 2020 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: 4 maminitsi Hapana mubvunzo kuti iwe unogona kubatanidza vateveri vazhinji uye vanyoreri venhau yako yemagariro ine yakanaka yemagariro midhiya kana iwe unogona kukwezva vamwe vashanyi kuwebhusaiti yako ine inonakidza graphic dhizaini. DhizainiCap chishandiso chinokupa iwe mukana wekuti uchinje chifananidzo chakareruka kuita mufananidzo unoyevedza. Wish ichi chishandiso, iwe unogona kugadzira giraidhi yemagariro midhiya kana webhusaiti zvemukati muhukuru hwakasiyana. Ngatione maitiro
DhizainiCap: Gadzira Yemahara Chikwangwani kana Flyer Pamhepo
Chipiri, January 15, 2019 Mugovera, January 19, 2019 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti Kana iwe uri mune yakasungwa uye uchida kugadzira yakapusa, yakanaka posita kana mapepa ... tarisa DesignCap Haasi munhu wese ari Illustrator guru kana anokwanisa kuwana graphic dhizaini, saka mapuratifomu akadai anouya chaizvo anobatsira. Ne DesignCap, unogona kutanga nekusarudza template yaunoda uye wobva wawedzera, kubvisa, kana kushandura chero ipi ye clipart iyo yakavakwa nayo kana yaunogona kuwana mukusarudzwa kwavo pamhepo.